Ahiana Horoahina Amin’ny Taniny Ireo Vazimba Teratany Ao Dourados, Mato Grosso do Sul · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2017 5:55 GMT
Trano fivavahana ao amin'ny faritra arovana indizeny Dourados, akaikin'i Yvu Vera. Sary : Marcello Casal Jr. – Agência Brasil CC-BY 3.0
Navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Instituto Socioambiental ity lahatsoratra ity, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Raha tsy misy ny fiovana, mankany amin'ny pejy amin'ny teny Portiogey avokoa ny rohy rehetra.
Ao Dourados, atsimon'ny fanjakana Breziliana Mato Grosso do Sul [fr], vondrom-piarahamonina vazimba teratany Guarani Kaiowá sy Terena no eo an-dalan'ny horoahina amin'ny taniny noho ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Miorina manodidina ny tanandehibe municipio, iray amin'ireo vondrom-piarahamonina enina nandray ho fananana ireo faritra anisan'ny faritra iarovana ny vazimba teratany Dourados – izay naorin'ny Sampan-draharahan'ny fiarovana ny Indiana 100 taona lasa izay mba hamaritana ny mponina ao amin'ny faritra sy hanafaka ny tany hozanahina.
Navoakan'ny Fitsarana Federaly faharoa ao Dourados tamin'ny 11 Janoary ny didim-pitsarana, izay nanapa-kevitra hampihatra baiko dimy haka ny fananana eo am-pelantanan'ny vazimba teratany ho averina any amin'ny [tompon'ny tany ara-taratasy], saingy lasa 14 Desambra 2016 indray ny daty tamin'izany, daty izay nanapahana ny fe-potoana 20 andro mba ahafahan'ny Fikambanam-pirenena Indiana (Funai) mampihatra ny baiko famerenana ny fananana. Tapitra sahady io fe-potoana io, ary manomboka izao, anjaran'ny polisy federaly no mampihatra ny didy.
Tamin'ny herinandro lasa sahady, nampahafantarina mikasika ny fivoaran'ny asan'ny Funai ireo mpitarika ny mponina indizeny, ary nangataka tamin'izy ireo ny polisy federaly mba hiala an-tsitrapo ao amin'ny faritra. Saingy tsy nanaiky ny Guarani Kaiowá sy ny Terena: Nanapa-kevitra tsy hiala ny vondrom-piarahamonina ary nampiseho fa tena vonona. Misy ireo olona manana olana ara-pahasalamana, olona izay mahafantatra tsara ny tantara. Tokony hofaritana ny tany”, hoy i Russi da Silva Martins, mponina Terena iray.
Nobodoina indray tamin'ny Febroary 2016 i Yvu Vera, tany eo amin'ny 20 hektara ary ahitana olona miisa 200 monina amin'ny trano hazo 70 eo ho eo ao amin'ny sisin-dalàna manodidina ny tanàna. Iray amin'ireo faritra efatra “nopetrahana indray” akaikin'i Dourados izy. Enina izy ireo tamin'ny herintaona, saingy noravaina ny roa tamin'izy ireo antsoina hoe Ita Poty sy Unati Pokee Huvera.
Tamin'ny Martsa 2016, taorian'ny fakàna ny fananana avy hatrany, niditra tamin'ny hetsika famerenana ny fananana ireo tantsaha sy tompon'ny tany. Mitaky ny fananana ny tany Sítio Bom Futuro, Fazenda Bom Futuro sy ny Sítio São Luiz ankehitriny ireo dimy nahazo didim-pitsarana manohana azy ireo, saingy nilaza ireo vazimba teratany fa tsy manana ny taratasin'ireo fananana ireo izy ireo.
Anisan'ny vondron'asa fanondroana ny faritra indizeny Bacia Douradopegua ity faritra ity, asa izay mbola tsy vitan'ny Funai. Nampakatra fitsarana ambony ny vondrona indizeny, ary miandry ny didim-pitsarana, matahotra ny vazimba teratany sao hidinan'ny mpitandro ny filaminana tampoka tahaka ny nitranga tamin'ny fotoana hafa.
Ao Caarapó, atsimo kokoa an'i Mato Grosso do Sul, faritra fahagola roa hafa ihany koa no rahonan'ny famerenana fananana, dia i Jeroky Guasu sy Ñamoy Guavira'y, izay anisan'ny faritry ny vazimba teratany Dourados Amambaipeguá I, notondroin'ny Funai tahaka izany tamin'ny herintaona.
Ny faritra arovana indizeny Dourados, 3 475 hektara dia fantatra ho iray amin'ireo voamariky ny herisetra sy ny hakitroky ny mponina ambony indrindra ao amin'ny tany indizeny. Mihoatra lavitra noho ny faritra arovana sasany naorin'ny Sampan-draharaha Fiarovana Indiana (SPI) tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-roapolo ny mponina ao aminy: tamin'ny taona 2010, mandrafitra ny 6,22 % ny mponin'i Dourados, tanàndehibe faharoa ao Mato Grosso do Sul ireo teratany vazimba ao amin'ny faritra voaaro; 15 023 ny isan'izy ireo tamin'ny taona 2014, araka ny tahiry avy amin'ny biraon'ny mpitan-tsoratra manokana misahana ny fahasalaman'ny teratany vazimba (Sesai).
Ho an'ilay mpahaiolombelona Diógenes Cariaga, izay mianatra momba ny faritra arovana, mifandray mivantana amin'ny teritery lehibe ara-demografika (habetsahan'ny mponina) iaretana ao anatin'ny faritra sy ny faharefoana ateraky ny dingana ara-tantaran'ny fambaboana ireo hetsika fakàna indray ny fananana ireo.
“Nanomboka tamin'ny fotoana nakan'izy ireo indray ny tany, namarana ny rafitry ny faritra arovana, fehezin'ny disadisa eo amin'ireo vondrom-pianakaviana izy ireo. Ity fitomboan'ny fakàna tany ity dia avy amin'ny fitomboan'ny habetsahan'ny mponina mivantana”, hoy izy nanazava. Araka ny heviny, mahafantatra tsara ny teratany vazimba fa ny dingana famaritana tany sy ny zo ara-paritr'izy ireo dia mety ho voatohintohin'ny krizy ara-politika ao amin'ny firenena. “Ny fibodoana ny tany no fomba iray hanaovana teritery”.